CILMIBAARIS & TALO-BIXIN: HABRAACA BUUG QORISTA, SIXID, DAABACAADDA & SUUQ-GEYNTA
Waxaan dhawaan bilaabay - oo weli xog ururin iyo cilmi-baaristiisii dhexda kaga jiraa - Buug ku saabsan jidka loo maro "Habraaca buug qorista, turxaan-bixinta, daabacaadda, iyo suuq-geyntiisa," gaar ahaan dariiqa loo maro, aaladda loo baahan yahay, iyo farsamada la adeegsado si loo qoro buug tayo wanaagsan, oo laga faa'iido, Allah idankiis. Waxaana xoogga saaraya nidaamka loo yaqaan "SELF-PUBLISHING" - FG: Kelmedda Self-Publishing weli uma helin kelmed Af-Soomaali ah oo xambaarsan nuxurkeeda.
Ahmiyada weyn ayay leedahay in la fahmo dhibta ay la kulmaan qalinleydu marka ay marayaan dhowr marxaladood ee soorida buug oo ah: (1) qorid; (2) sixid iyo tafatirid; (3) daabacaad; (4) suuqgeyn. Afartaasba waxaa lagala kulmaa caqabaado, sababtaas ayaan u samaynayaa cilmibaaristan. Haddaba, anigoo xeerinaya in aad arrimaas aqoon, khibrad, iyo xirfad u leedahay, waxaan kaa codsanayaa in aad su'aalaha hoos ku qoran iga siisid talo-bixin iyo tusaalayn. Fadlan jawaabaha toos ugu qor meelaha u bannaan, kaddib riix batoonka "SUBMIT". Waadna ku mahadsan tahay waqtigaaga.
Da'daada waa immisa *
Ka yar 30 sano
U dhexeeya 31 - 45 sano
U dhexeeya 46 - 60 sano
Ka weyn 60 sano
Lab ama dhedig *
Heerka Waxbarashada *
Heer Dugsi Sare
Jaamacad heer darajada 1aad
Jaamacad heer darajada 2aad iyo ka sare
Magaalada iyo Dalka aad hadda deggan tahay *
Immisa buug ayaad daabacday? *
Waqti intee leeg ayay kugu qaadatay in aad buugga qortid - bilow ilaa dhamaystir? *
Habraaca aad u martay qoridda buugga: *
Maskaxda kasoo maaxdey
Qaabka aad u martay daabacaadda *
Madbacad caadi ah
Self-Publishing (sida CreateSpace, Ingram, Lulu, iwm)
Meesha lagu daabacay buugga? *
Tiro intee leeg ayaad ka daabacday buuggiiba? *
Habka aad u martay suuqgeynta buugga? *
Meesha aad ku gaddid buugga? *
Waqtiga ay qaadatay in ay ku gadmaan buugta? *
Maxaa kugu dhiirigeliyey in aad qortid buugga? *
(1) QORID: Caqabadihii aad kala kulantay marxaladdii QORISTA buugga iyo xalkooda *
(2) TAFATIRID: Caqabadihii aad kala kulantay marxaladdii SIXIDDA IYO TAFATIRIDA buugga iyo xalkooda *
(3) DAABACAAD: Caqabadihii aad kala kulantay marxaladdii DAABACAADDA buugga iyo xalkooda *
(4) SUUQGEYN: Caqabadihii aad kala kulantay marxaladdii SUUQ-GEYNTA buugga iyo xalkooda *
Barnaamijkee u adeegsataa buug qorista: *
Qodobo ama mowduucyo noocee ah ayaad ku talineysaa in aan ku daro buugga ku saabsan "habraaca buug qorista" si uu u noqdo mid ummadeena anfaca, insha-Allah. *
Madbacadaha caadiga ah ee buugta daabaca ee Soomaalida xiriirka la leh ama ay adeegsadaan nidaamkee loo maraa? *
Sidee u aragtaa in buugga laga dhigo eBook oo markaas lagu suuq-geeyo AMAZON, KOBO, iwm? *
Waxaan ku fikiray in cinwaanka guud ee buugga ka dhigo "HABRAACA BUUG QORISTA" ama "SELF-PUBLISHING KU BARO AF-SOOMAALI", kuna hoos qoro "Waxaad ku baran doontaa Buug Qorista, Tafatiridda, Daabacaadda iyo Suuq-geynta." Laakiin kelmedda "Self-publishing" nuxurkii buuggu kama muuqanayo. Marka cinwaan noocee ah ayaad ku talin lahayd?
Talo-guud ee ku saabsan buug qorista, fadlan ku qor halkan: *
Qodobkani shardi ma ah - laakiin magacaaga iyo emailkaaga hadii aad qortid waxaan ku darsanayaa qalinleyda aan talo bixinta weydiisto, insha Allah. (Anigoo ah Maxamed Cali Aaden, waxaan kaaga madcelinayaa waqtiga aad ku bixisay jawaabaha. MAHADSANID.)